Jam ka soo-gaarsi leh liin, cunto kariye. Jam oo ka soo-noqnoqda leh liin, talaabo tallaabo tallaabo ah.
Daboolka guriga Cunnooyinka Kuwa kale Cunnooyinka daaqadaha ee jiilaalka Jam jiilaalka
Dhaqaaqa macaan: macmacaan karsan oo laga soo saaro shuban iyo liin
Qodbada macmacaanka guriga ka soo baxa tufaaxa shaah ah iyo liin
Burburkii shaaha wuxuu ahaa ma aha oo kaliya qurux badan oo loogu talagalay beerta, laakiin sidoo kale ilaha nafaqada. Maalin kasta oo cusub ayaa ubaxyada ku duugaya, quruxda aad doonayso inaad muddo dheer sii haysato. Ha u ogolaan in tayada jilicsani ay dhulka ku dhacaan, maxaa yeelay waxaad abuuri kartaa macaan macaan oo casaan leh oo liin ah sida kudheeraalkeena.
Marka lagu daro dhadhanka cajiibka ah iyo caraf udgoon, tani waxay kaloo leedahay faa'iido caafimaad oo weyn. Haddii aad ku dhufato rooti sarreen ah oo rooti ah oo leh subag iyo macaan of shuban iyo liin, qaboobaha qaboobaha ayaa kaa gudbin doona. Intaa waxaa dheer, waxaa loo isticmaali karaa walxo badan oo culus: waxaa lagu daraa borotiinka dufanka leh, ku rid qaybta hoose ee bakeeriga gaaban, ku dar jilciska guriga. Oo kaliya ku raaxee shaah kulul habeenkii jiilaalka, xusuusnow maalmaha diiran iyo qoraxda.
Jam ka soo bixinta iyo liin - tallaabo by qodaya talaabo
Si aad u diyaargarisid macaanka macaan ee casaanka leh leh sharoobada karamelized ee aad u baahan tahay inaad ku qaadato 25 daqiiqo oo keliya. Cuntada waxaa ku jira liin, kaas oo siinaya macmacaanka gaarka ah ee casriga ah iyo ilaalinta iftiinka tufaaxa. Marka la eego joogteynta, macaanka la diyaariyey wuxuu u eg yahay malab ah dareeraha, iyo dhadhanka - dhadhanka macquul ah.
Maaddooyinka loo baahan yahay:
tufaaxa shaah ah - 1 dhalo
biyaha - 1 dhalo
sonkorta - 3/4 koob
liin - 1/2 pcs.
Tilmaamaha tallaabo tallaabo tallaabo ah:
Waxaan soo ururinaynaa ubaxyada ubaxyada iyo ubaxyada kala soocaan. Caleenta cayayaanka leh oo la qalajiyey ayaa la tuuraa, iyagoo isticmaalaya kaliya ubaxyo "nool" oo casiir leh "macaanka" macaanka.
Qoraalka! Ma aha noocyada kala duwan ee shinbiraha shaaha ku haboon yahay samaynta macaanka. Daweynta ugu macquulsan waxaa laga helaa noocyo kala duwan oo tufaax ah oo midabka khafiif ah.
Kalluunka waa la dhaqaa oo ku faafaa tuwaal waraaq ah.
Aynu bilowno diyaarinta sharoobada. Ku shub biyo gali oo ku shub qiyaasta sonkorta oo idil. Dareerka waa la kariyaa ilaa sonkorta si dhammaystiran u daboosho dabka.
In sharoobada la dhammeeyaa waxaan dhignaa tufaax ubax oo walaaqaya. Dib ayaan ugu celinaynaa dabka ilaa dabka iyo karkariyo macaanka 10 daqiiqo. Markaas ku shub casiir, ka soo baxay nus ka mid ah liin, iyo kariyo waxyaabaha ku jira digsiga 5 daqiiqo dheeraad ah.
Fadlan fadlan! Inta lagu jiro diyaarinta macaanka, dabka waa in lagu hayaa ugu yaraan, sidaas darteed tufaaxa aan ka badneyn.
Waxaan dhigeynay macaanka diyaarinta ee kushiinka jeermiska lagu shubay iyo daboolka daboolka. Ka dib qaboojinta, macaanka buuggan wuxuu noqdaa mid cufan oo udgoon. Ku hay qol qabow ama qaboojiyaha.
Jam oo ka soo jeeda (Kiev)
Jam ka soo strawberries (Kiev)
Blueberry boom: cuntada ugu fiican ee macaanka blueberry faa'iido leh
Macmacaanka macaan ee jiilaalka
Jam of tangerines
Jam laga bilaabo strawberry (Kiev)
Bruce Lee waa cunto iyo cunto
Fikradaha iyo qasaarooyinka ka-hortagga uur-qaadida ee galmada la joojiyo
Sida loo soo celiyo timaha qalalan
Isku darka daaqadaha iyo darbiyada ka hor xilliga qaboobaha
Salad laga soo qaado bacaha, saxarada iyo digirta
Hadiyad galmo gabar ah taariikhda
Kalluunka "Oflameron" (macmudka 1901)
Boorash laga sameeyo bocorka
Naas-nuujinta iyo uur cusub
Qodobada Timaha Qurxinta
Cilmi-nafsiga carruurta ee xanaanada
Salad «Janno Cows»
Jacayl aan la aqbali karin iyo waxa la sameeyo
Waxa la sameeyo haddii ilmuhu habeenkii isku wareegi doono
Turka wax lagu kariyo kafeega, sida loo doorto
Fargalinta indhaha markaad ka shaqeyneyso kombiyuutarka